I-Ultrasonic Degassing ne-Defoaming of Liquid - Hielscher Ultrasound Technology
Ukwenza i-degassing nokuchithwa kwamagama oketshezi usebenzisa i-ultrasonic kuyinkqubo ephumelela kakhulu. I-Ultrasonication isusa ama-bubble amancane amisiwe ketshezi futhi inciphisa izinga legesi elichithakele ngaphansi kwezinga lemvelo lokulingana.
Ukuchithwa kanye nokuchithwa kwamagama oketshezi kuyadingeka ngezinhloso eziningi, ezifana nezinqubo ezilandelayo:
ukulungiselela isampula ngaphambi kwesilinganiso sikasayizi wezinhlayiyana ukugwema amaphutha wokulinganisa
uwoyela ne-lubricant degassing ngaphambi kokumpompa ukunciphisa ukugqokwa kwepompo ngenxa ye-cavitation
Ukuqedwa kokudla oketshezi, isb. ijusi, isoso noma iwayini, ukunciphisa ukukhula kwamagciwane nokwandisa impilo yeshalofu
ukususwa kwama-polymers nama-varnishes ngaphambi kokufaka isicelo, ukwelashwa noma ukumnika ukumunca
Lapho kuhanjiswa uketshezi, amagagasi omsindo asakazeka kusuka endaweni ekhanyayo angene emithonjeni yezindaba eziwuketshezi aholela ekushintsheni imijikelezo ephezulu yengcindezi nengaphansi kwengcindezi, ngamazinga ngokuya ngemvamisa. Ngesikhathi somjikelezo onengcindezi ephansi, amagagasi e-ultrasonic angakha amabhamuza amancane we-vacuum noma avale kuketshezi. Inombolo enkulu yamabhamuza amancane akhiqiza indawo ephezulu yendawo ephelele. Amagwebu nawo asatshalaliswa kahle kuketshezi. Igesi elincibilikisiwe lingena kulawa mabhuluvu ashubile adlula endaweni enkulu yomhlaba futhi andise usayizi wamabhamuza.
Amagagasi ase-acoustic asekela ukuthintana nokubambisana kwamabhulabhisi athile okuholela ekukhuleni okusheshayo kwamabhule. Amagagasi e-sonication ayosiza futhi ukuxubha ama-bubbles emiphakathini yomkhumbi futhi izophoqa amabhulu amancane aphumule ngaphansi kwe-liquid surface ukuze avuke futhi akhulule igesi elibanjelwe emvelweni.
I-Ultrasonic degassing kawoyela kusetshenziswa iprosesa ye-Hielscher 200 Watts ultrasonic.
Inqubo yokwehliswa nokuchithwa koketshezi kungenziwa ibonakale kalula. Ku-beaker yengilazi yamanzi asempompo asanda kuthululwa, i-ultrasonication izophoqa amabhamuza amancane amisiwe ukuba ahlangane futhi akhuphuke ngokushesha. Ungawubona lo mphumela esithombeni sokuqhubeka ngezansi.
i-degassing ye-ultrasonic yamanzi (imizuzwana engu-5)
Amafutha ayaluzekile aqukethe inani eliphakeme lamagwebu amisiwe noma igwebu. Ikakhulukazi kuma-coolants, lokhu kuyinkinga. Lapho, amabhamuza egesi akhuthaza ukugqoka okufakwe ku-cavitation kumaphampu noma emibhobho. Isithombe sokuqhubeka ngezansi sikhombisa umphumela we-ultrasonic defoaming.
I-Sonication izokhiqiza amabhamuza amancane we-vacuum emanzini acacile, amile. Lawa mabhamuza agcwalisa igesi encibilikisiwe, efudukela kumabhamuza. Ngenxa yalokho amabhamuza ayakhula futhi akhuphukele phezulu. Umphumela we-degassing ubonakala kahle kunoma yiluphi uketshezi oluguqukayo.
Njengoba i-ultrasound ithuthukisa ukukhuphuka kwamabhamuza amancane amisiwe ebusweni bolu ketshezi, inciphisa nesikhathi sokuxhumana phakathi kwebhulebhu noketshezi, futhi. Ngalesi sizathu, kukhawulela ukuncibilika kabusha kwegesi kusuka kubhamuza kuye ketshezi, futhi. Lokhu kuthakazelisa kakhulu uketshezi oluphezulu lwe-viscosity, njengamafutha noma izinhlaka. Njengoba amabhamuza kufanele ahambele endaweni engamanzi, i-ultrasonic degassing isebenza kangcono, uma isitsha singajulile ukuze isikhathi saphezulu sibe sifushane.
Ngaphandle kwemiphumela ebonakalayo
Ukulinganiswa kwemiphumela ye-degassing ngokuhlolwa kokubuka kunqunyelwe ngokunemba. Izilinganiso zokuqukethwe kwegesi ziyindlela enembile yokutshela ngokusebenza kahle kwe-ultrasonic degassing.
Izikhukhula ziqukethe inani elithile legesi elincibilikisiwe. Ukuhlungwa kwegesi kuncike ezicini, ezinjengamazinga okushisa, ingcindezi esezingeni eliphakeme noma ukuyaluza koketshezi. Ngaphansi kwezimo eziqhubekayo, ukuminyana kwegesi kuzosondela ekulinganeni. I-Ultrasonic degassing izoshintsha izimo, ngoba uketshezi luvezwa kumabhamu wengcindezi ephansi nasekuyalukeni. Ngakho-ke, i-ultrasonication izokwehlisa ukugxila kwegesi kuketshezi kuye ngaphansi kwezinga lokulingana.
Lapho i-sonication iyeka futhi nezimo zokuqala zisungulwa kabusha, ukuminyana kwegesi kuzosondela kancane kancane ezingeni lokuqala lokulinganisa futhi, ngaphandle kokuthi uketshezi aluvezwanga kunoma iyiphi igesi, isib ebhodleleni elivaliwe. Ngoba ukuchithwa kabusha kwegesi kuketshezi kuhamba kancane, kungenzeka ukuthi usebenze nophethelo lwegesi ephansi ngemuva kwe-sonication. Igrafu engezansi ikhombisa lo mphumela.
Umdwebo we-Ultrasonic Degassing
Ukuhlukumeza ngaphambi kokumisa futhi ukuhlakaza
I-Ultrasonic degassing ingathuthukisa ikhwalithi yokuhlakazeka kanye ne-emulsions.
Imvamisa, ama-emulsions kanye nokuhlakazwa kuqukethe ama-surfactants ukuze kwandiswe ukuzinza kwawo. Ama-surfactants azovimbela ukuxhumana nokuhlangana noma ukuhlangana kwezinto ezihlakazekile esigabeni soketshezi. Ngalokhu, ama-surfactants azokwakha ungqimba oluzungeze inhlayiyana ngayinye. Ama-surfactants afanayo angafaka futhi amabhamuza egesi amisiwe esigabeni samanzi. Amagwebu azinzile anjalo angabonakala enamandla kakhulu. Amabhamuza azinzile adla osebenza ngokusebenza, anciphisa ikhwalithi ye-emulsion noma ukusabalalisa, futhi angakhipha ukufundwa okungahambi kahle lapho kulinganiswa usayizi wezinhlayiyana.
Ukuze kuncishiswe inkinga yamabhamuza egesi azinzile, uketshezi kufanele luhlulwe nge-sonication. Ngaphambi kokungeza isigaba sokuhlakazeka, njengamafutha noma i-powder, thambisa uketshezi kuze kube yilapho isibalo samabhamuza akhiqiziwe sincipha. Lapho uxubana nezinye izinto, gwema ukukhiqiza amabhamuza amasha noma i-vortex ngenkathi unyakaza. Lokhu kuzokhuphula okuqukethwe kwegesi ngokushesha.
Ukuphoqelela i-Carbon Dioxide Out
Umphumela we-degassing usetshenziselwa ukuhlolwa kokuvuza kwamathini kanye namabhodlela aqukethe iziphuzo ze-carbonated, njenge-cola, i-soda noma ubhiya. Sicela uchofoze lapha ukuthola eminye imininingwane ngokuhlolwa kokuvuza kwamabhodlela.
I-Ultrasonic Degassing Ngamafuphi
I-ultrasonic degassing yeziphuzo isebenza kangcono lapho usebenzisa ukusetha okulandelayo.
Faka isicelo se-low amplitudes ye-ultrasonic ephansi!
Sebenzisa ama-sonotrode anendawo enkulu ebanzi, isb.
Nikeza ingcindezi ephansi noma i-vacuum ngaphezulu kwe-liquid surface wile sonicating!
Fudumeza uketshezi, ukunciphisa i-viscosity yalo!
Sebenzisa isitsha esingajulile ukuhlukaniswa kwegesi ngesikhathi noma ngemuva kwe-sonication!
Gwema ukuyaluza okunesiyaluyalu ukuvumela amagwebu kagesi ukuthi akhuphuke!
I-Ultrasonic degassing ingasetshenziswa kumodi ye-batch noma emgqeni. Endabeni yokusebenza okusemgqeni, kufanele kufakwe ipayipi lokumisa ukukhishwa kwegesi bese kufakwa iphampu yegesi.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi ukuchaza izidingo zakho zoketshezi oketshezi. Sizojabula ukukuthumelela isiphakamiso senqubo yakho ye-degassing.